Forum serasera malagasy Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahadimy - Dinika forum.serasera.org
Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahadimy
Fitohizan'ny hafatra : Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahadimy
Nehemiah - 11/05/2013 08:04
Efa noresahana lalindalina ihany ny fifandraisan'ny fotopisainan'i Darwin sy ny eozenisma. Ka mety miteny ny sasany hoe: "Tsy mba nampianatra na niteny na nieritreritra momba an'izay anie i Darwin e !" Ka mba zohio anie ny zavatra nolazain'i Darwin t@ "The descent of man", (vol. 1, p. 168), momba ny fiheverany ny fihavanana kristiana sy ny eozenisma :
Any @ olon-dia izao dia ringana faingana izay osa vatana na osa saina, ary izay mahavita manohy ny ainy dia matetika salama sy tomady. Isika olona ao anatin'ny sivilizasiôna kosa dia manao izay tratry ny aintsika mba hamehezana ny fizotran'ny fandringanana ; manorina toby ho an'ny adala sy ny sembana ary ny marary isika ; mamoaka lalàna ho an'ny mahantra isika ; ary manao izay tratry ny ainy ny mpitsabontsika mba hamonjena ny ain'ny rehetra hatr@ farany. Azo heverina fa nanavotra olona osa an'arivony izay tokony ho ringan'ny nendra ny vakisiny. Hany ka mitombo ny isan'ny olona osa @ fiaraha-monina misy sivilizasiôna. Tsy misy olona izay niatrika ny fiompiana biby izay hisalasala fa mitondra faisana ho an'ny olombelona izao fomba fanao izao. Mahagaga fa malaky mitarika fahalovana ho an'ny karazana biby fiompy ny finiavana hikarakara, na ny fikarakaràna diso lasibatra ; kanefa moa, vitsy ny olona mamela ny bibiny osa indrindra hiteraka noho ny habadoany, afa-tsy @ momba ny olombelona indrindra.
Na dia i Clinton Richard Dawkins aza dia mieritreritra fa mety tsy dia tena ratsy ihany ny eozenisma. T@ taratasy nosoratany ho an'ny mpanatonta ny gazety Sunday Herald (Ekôsy) t@ 19/11/2006, milaza izy fa, na dia tsy azo atao aza ny miombon-kevitra @ Hitler, azo iriana sy ampiharina ny eozenisma. Manoratra izy hoe :
Raha azo atao ny miompy omby mba hamokatra ronono bebe kokoa, na soavaly mba hiazakazaka haingana kokoa, na alika mba hahay hitandrina andiam-biby bebe kokoa, nahoana ary no tsy ho azo atao ny miompy olombelona mba hahay matematika na mozika na fanatanjahan-tena bebe kokoa ?
Dia tsy avela hiteraka izany izay tsy manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo ?
Tohizany hoe :
Mba manontanin-tena aho, 60 taona aorian'ny nahafatesan'i Hitler, tsy mba azo atao ihany ve ny manontany ny mahasamihafa @ lafiny ara-pitondrantena ny miompy ho an'ny fahaizana mozika sy ny manery ankizy hianatra mozika ? Torak'izay koa nahoana no azo ekena ny manazatra mpihazakazaka fa tsy azo ekena ny miompy azy ? Misy valiny vitsivitsy azoko eritreretina, ary tsara izy ireo, ka mety maharesy lahatra ahy mihitsy @ farany.
Fa maninona kay no resahiny eto i Hitler e ? Inona angaha no nanery an'i Dawkins hampiditra an-dry Adolf ao anatin'ny resaka e ? Ny mahatonga an'izay dia nataon'i Hitler ho toeram-panandramana goavana be ho an'ny heviny eozenika ny 2/3-n'ny Eorôpa !
Hitantsika @'ity logo ho an'ny konferansa iraisam-pirenena faha-2 ho an'ny eozenisma fa neverina ho tokony miara-miasa ny siansa rehetra mba hamokaràna ny olombelona tomady sy lalin-tsaina indrindra :
Tena misy gazety-boky manokana mihitsy miresaka momba ny eozenisma. "Eugenics quarterly" no lohateniny hatr@ 1968, fa t@ 1969, niova ho "Social Biology" tampoka ny anarany (dia gaga ialahy).
Nehemiah - 11/05/2013 08:07
Ity indray ny rohy mankany @ fizaràna manaraka ho an'izay liana :